Ukuqaliswa kwii-aquariums | Ngeentlanzi
Ngokwenyani Ukuzonwabisa kwe-aquarium yindlela yokuqonda ubomi baselwandle kunye neentlanzi. Ukuba ne-aquarium ekhaya ayisiyo nje into oyithandayo, ikwaluxanduva. Impumelelo yethu ixhomekeke kakhulu kwixesha kunye nenkathalo esiyisebenzisayo kwi-aquarium kunye nabemi bayo, iintlanzi.
Ukuzonwabisa nge-Aquarium yisayensi. Kwakhona umdlalo. Kodwa ngenxa yoko, kuya kufuneka ulandele kwaye ufunde amanyathelo ambalwa ukuze uyiqonde kwaye ufezekise injongo yokuqala njengolwaluko. I-aquarium kufuneka ihonjiswe kunye neemeko eziyimfuneko ukuze Iintlanzi zihlala ziphilile kwaye sinikezela ngononophelo olufanelekileyo.
Kuwo wonke umntu ozithandayo oqala kweli hlabathi, kuya kufuneka athathele ingqalelo, okokuqala, ukuba ulwazi oluncinci lunokufunyanwa. Ukuba ikhona thatha ingqalelo umthamo we-aquarium. Kuba ekuhambeni kwexesha iintlanzi ziyakhula kwaye zinokuba zincinci. Akukhuthazwanga ukuba igqithise. Ubuncinci besayizi iya kuba yimilinganiselo ye-60 cm ubude kunye ne-30 cm ububanzi kunye nobunzulu. Ngalo lonke ixesha kuthathelwa ingqalelo iintlobo zentlanzi ekufuneka zibandakanyiwe.
Indawo ye-aquarium ibalulekile
Nje ukuba i-aquarium ikhethwe, indawo ekuyo ibalulekile. Ukuba ngu I-aquarium yemilinganiselo emikhulu asinakuyihambisa rhoqo. Kuyacetyiswa ukuba ungazibeki kwindawo apho kukho ilanga elininzi kunye nokukhanya. Oko kuya kubangela ukuba i-algae yande. Akufanelekanga ukuyibeka kwiindawo apho kukho iidrafti.
Ngokwenene ukuba ne-aquarium akubandakanyi umsebenzi omninzi. Kodwa ukuba kunyanzelekile ukuba yakho indawo ifikeleleka ngokulula yokusingathwa. Utshintsho lwamanzi, luxhaphake kakhulu kwi-aquarium. Kuya kufuneka ube neeplagi ezikufutshane zokudibanisa izixhobo.
Siza kubeka i-aquarium kwi indawo eqinileyo nethe tyaba ukuze ingabinayo i-oscillations eseleyo kwaye iwe. Kanye neendawo ezinokuthi zibeke emngciphekweni uzinzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ukuqaliswa kokuzonwabisa kwi-aquarium
USofia Franco sitsho
Mholo!! Ndizama ukutshintsha iintlanzi zam ezi-2 ezisuka kwitanki leentlanzi ndizise emthonjeni endiza kuwakha, kodwa kuqala ndifuna ukuzilungiselela ukuze ndazi ukuba kubalulekile ukuthenga ukwenza i-ecosystem. Kuba iintlanzi zam zikhulu, (baneminyaka eyi-6 kunye nam) kwaye zilinganise ngaphezulu kwe-25cm, ndinomdla wokwazi, zeziphi ezinye iintlanzi abanokuhlala nazo? Kwaye kufuneka ndenze ntoni kumthombo wokwenza indalo yayo? Sele ndiyazi indlela yokuthenga isihluzi okanye izityalo zaselwandle.
Ndinomdla kakhulu kuluvo lwakho kwaye nangaphezulu kwayo nayiphi na ingcebiso yakho kule projekthi ndinayo.
Phendula Sofía Franco
Yorman leon sitsho
Mholo! Ngaba kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwii-aquariums? Enkosi
Phendula uYorman Leon